ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို မွန်တိုင်းရင်းသားများကန့်ကွက် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / သတင်း / ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို မွန်တိုင်းရင်းသားများကန့်ကွက်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ October 30, 2012 သတင်း 17 Comments 6,269 Views
ရေးသားသူ: ပျူနှင့်မြန်မာ > သတင်း > သထုံ > သုဝဏ္ဏဘူမိ
ယင်းကန့်ကွက်စာကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၊ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအုန်းမြင့်နှင့် ပျူနိုင်ငံတော် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါက်တာချစ်စံဝင်းထံသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မွန်အထိမ်းအမှတ် မနုဿသီဟရုပ်ပုံပါသော သထုံမြို့ရိုးဟောင်း
“ကျနော်တို့ မွန်တွေရဲ့သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ သထုံပြည်ကို ပျူနိုင်ငံတော်ထဲ ဆွဲသွင်းတဲ့ ပြောဆိုရေးသားချက်တွေကို ကန့်ကွက်တယ်၊ ထင်းရှားနေတဲ့မွန်သမိုင်းတွေကိုလည်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ သူတို့မှေးမှိန်အောင် လုပ်ဆောင်နေတယ်၊ အဲဒီပျူစာတမ်းဖတ်ပွဲကို မွန်တွေလုံးဝအသိအမှတ်မပြုဘူး၊” ဟု မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီ ဒု-ဥက္ကဌ(၂) နိုင်တင်အောင်က ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ဓမ္မာရုံတွင် အထင်ကရမွန်ဆရာတော် ၁၁ ပါး၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ၊ မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ဒေသအသီးသီးမှ မွန်စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှင်စောပုမွန်အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းနှင့် မွန်စာပေပညာရှင်များပါဝင်သော ၃၇ ဦးကော်မတီပါ မွန်သုတေသနအသင်း ယမန်နေ့တွင်ဖွဲ့စည်း၍ ကန့်ကွက်စာ ရေးသားပေးပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကန့်ကွက်စာတွင် အချက် ၇ ချက်ပါဝင်ပြီး အောက်တိုဘာ ၁၂ နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာပါ “မြန်မာနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုအတိုးတက်ဆုံး၊ အထွန်းကားဆုံး ရှေးဟောင်းပျူမြို့ပြများ သမိုင်းဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပမည်” သတင်းဖေါ်ပြချက်တွင် “မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ပျူလူမျိုးတို့ပြန့်နှံ့စွာနေထိုင်ခဲ့သည့် မြေဧရိယာအကျယ်အဝန်းသည် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျယ်အဝန်းမျှရှိပြီး တကောင်း၊ ဟန်လင်း၊ ဗိဿနိုး၊ သရေခေတ္တရာ၊ ဓညဝတီ၊ သုဝဏ္ဏဘူမိ(သထုံ) အစရှိသောမြို့ပြနိုင်ငံကြီးများထူထောင်၍ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း” ရေးသားချက်ကို အဓိကရည်ညွှန်းသည်ဟု သိရသည်။
အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ အငြိမ်းစားညွှန်ကြားရေးမှူး နိုင်မောင်တိုးက “သူတို့ဘယ်လိုဆွဲခေါ်လာသလဲဆိုတော့ ပျူဆိုတာ ဗမာဖြစ်တယ်၊ ရခိုင်ပြည်ဓညဝတီနဲ့ သထုံပြည်သုဝဏ္ဏဘူမိဟာ ပျူတွေအရင်ဦးဆုံးရောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီဒေသတွေမှာ ဗမာတွေအစောဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ အဲဒီလိုအဓိပ္ပါယ်ရအောင် ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အထက်ပါ ပြောဆိုရေးသားမှုများသည် လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်စေသဖြင့် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ထိခိုက်နေသည်ဟုလည်း သူကဆက်ပြောသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် ယမန်နေ့ မွန်သမိုင်းသုတေသနအသင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာတွင် ဥက္ကဌအဖြစ် နိုင်မောင်တိုး အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်နိုင်ခင်မောင်လေး(အငြိမ်းစားမွန်ပြည်နယ်ပြတိုက်မှူး) တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် နေပြည်တော်ရောက် မွန်လွှတ်တော်အမတ်များကလည်း အထက်ပါကြေးမုံ သတင်းစာရေးသားချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးသို့ မေးခွန်းများမေးမြန်းရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်ဟု သိရသည်။
ပျူနှင့်မြန်မာ သတင်း သထုံ သုဝဏ္ဏဘူမိ 2012-10-30
Tags ပျူနှင့်မြန်မာ သတင်း သထုံ သုဝဏ္ဏဘူမိ
Next ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာတွင် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ၌လည်း အဓိကတာဝန်ရှိဟု UNA ပြော
နောက်ပြီးကျနော်တို့ရဲ့ ရှေးဟောင်ဟဉ်ကျေးမှုကို သူတို့က အပိုင်သိမ်းမယ်လို့ ကြံစည်တာနဲ့ တူတူဘဲဗျာ
ကျနော်ကကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိရင်တော့ကျနော်တို့က အသက်ပေးပြီးတော့ ကာကွယ်ပေးမှာဘဲ ကျနော်က ဒါက လုံးဝလုံးဝ မဖြစ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စဘဲ နောက်ဆိုကျနော်တို့ ယဉ်ကျေးမှု ကိုပါ သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ ကျနော်မကြိုက်တဲ့ စကားလုံးတခုရှိတယ် ”ပျူလည်းမြန်မာ” အဲဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး။
ဒေါက်တာချစ်စံဝင်းဆိုတာ ဘယ်ကဒေါက်တာဘွဲရပါလိမ့် စာရေးဆရာချစ်စံဝင်းပါလား။ ဂုဏ်ထူးဆောင်
ဒေါက်တာပါလား။ သုတေသနဘယ်လောက်လုပ်ဖူးပြီးလဲ သမိုင်းနင့်ပက်သက်ပြီး.စာအုပ်စာတမ်းဘယ်
လောက်ထုပ်ပြီးပြီးလဲ။ ပညာရှင်တွေလက်ခံနိင်အောင် ဘယ်စာအုပ်များရေးဖူးပါလိမ်။ အပျော်တမ်းစာပေ
နင့် သူများရေးထားတဲ့စာပေလောက်ကို ဘာသာပြန်ရုံနှင့် တကယ့်ပညာရှင်မဟုတ်ပါ။
သူကသမိုင်းနင့်ပက်သက်ပြီး ပညာရှင်တွေလက်ခံနိင်အောင် သမိုင်းသုတေသနစာအုပ်စာတမ်း ဘယ်
လောက်ရေးဖူးပြီလဲ။ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲလောက်နင့်တော့ ရခိုင်သမိုင်းမွန်သမိုင်းတွေကို ရှောက်
Dear Sirs, First let us listen to what they read and write. Then take appropriate action. It’s an exchange of idea and not of grabbing of land by force that I also object. It’sacultural thing. Thanks.
ဟေ့ ( ချစ်စံဝင်း မဟာလူမျိုးကြီ)မင်ဘယ်လောက် အနိုင်ကျင့် နိုင်မလဲ ကျင့်ထာပါကွာ ပြည်ထောင်စုမြေပုံ ပူတာအိုကနေ ကော့သောင်ထိ မင်ပြန်ဆန်စစ်ပါ မင်တို့ မဟာလူမျိုးကြီ သမိုင်ကလွဲပြီ တခြားသော တိုင်းရင်းသားတွေသမိုင်း စစ်သမိုင်မှန်တွေ သိထားတဲ့ပညာရှင် အများကြီးရှိတယ်။
Oak Soe Htite
The Pyu can not be Bamar (Myanmar). And it will not be never happened. Pyu can be ratheragroup of ethnics from one tribe. But can not be Bamar or Myanmar, never. How come, the rootless people want to find the root. Shameless activities. If all Myanmar peoples has enough brave to test (DNA), I believe that most of so called Myanmar must be, Mon, Kayin, Chin and Shan. So, at that time you will see the less will be Myanmar, historically or orally the people those who served or slave of Kings are Myanmar. But not so sure because so called myanmar famous kings such as Anaw Ra Htar, Kyan Sit Tharr and etcs are historically and genetically, they are Indians and not the natives. So, who are myanmars? There is no reasonable and logical answer for that. But illogical things is that within 80 years, how come myanmar populations is getting terribly so high, it is so doubtful. It is impossible. So, by DNA testing, we can find who are Myanmar or whether Pyu can be Myanmar or not.
they are Indians and not the natives ဆိုတာ ဘယ်လို သက်သေပြနိုင်မလဲ။ အထောက်အထားရှိရင် သိချင်ပါတယ်။
ပျူဆိုတာ မြန်မာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ထားပါတော့။ အနော်ရထာတို့ ကျန်စစ်သားတို့က ဘယ်ကဘယ်လို အိန္ဒိယသားဖြစ်သွားရတာတုံး။
ပျူတွေကို၊ နောက်မှအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ ဗမာတွေကပဲ ဖယ်ရင်း၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရင်းနဲ့ပဲ ဗမာလူဦးရေတိုးပွားလာတာဖြစ်မယ်။ CE ၈၀ဝ ဝန်းကျင်လောက်မှာပဲ ဗမာလူမျိုးတွေက ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း မြေသြဇာကောင်းမွန်တဲ့နေရာကောင်းတွေကို သိမ်းယူလာတော့ သူတို့အလျင်ရောက်နှင့်နေတဲ့ ပျူ၊ ကမ်းရန် (ရခိုင်)၊ သက် (ချင်း) လူမျိုးတွေက နေရာဖယ်ပေးရတဲ့ အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နောက် အနှစ် ၂၀ဝ ခန့် ၁၁ ရာစုမှာ အနော်ရထာတို့၊ ကျန်စစ်သားတို့၊ ရာဇကုမာရ် တို့ဆိုတာက အိန္ဒိယပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေဖြစ်တော့ မြန်မာပြည်ကို လာရောက်ခိုလှုံရာကနေ ဗမာတွေဖြစ်လာကြတယ်ဆိုပါတော့။ ဒီလိုနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာက အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုထဲမှာ ကြီးထွားပျံ့ပွားလာတာပါ။
ရဲမင်းထွန်း (မာံထာဝရ )
၁။သူငယ်ချင်းပြေားတာ အထောက်အထားမရှိဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာက မွန်တွေ ဆီကနေယူလာတာပါ ၂။အနော်ရထာ မင်းလက်ထက် ပေးသူ သထုံပြည်မှ ရှင် အရဟံ ၃။ ဗမာတွေ ပျူလုံးဝ မဖြစ်နိုင်းဘူး ပျူတွေကို တရုတ်တွေ ကို ရုံးနိပ်လို့ ၄။တရုတ်ပြည်ကို စစ်သုတ်ပန်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွာတာနဲ့ ပျူလူမျိုး ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ရတာ ပါ ဒါကသူတို လူမျိူးကို ဂုဏ်တက်အောင်းတမင်သက်သက် အကွက်ဆင် လုပာ်ကံတာပံ တော်တော် ကောက် ကျစ်ယုတ်မာတဲ့ ကောင်းတွေပဲ ကျေးဇူရှင် ကို ကျေးဇူးမသိတတ်တာတောင်မက ဘူး အမျိုးပျောက်အောင်းလုပ်တဲ့ကောင်းတွေ ကကကကကျနော်တို့သူငယ်ချင်း
ဒါကို လူမျိုးအဓိကာရုဏ် ဖမ်းတီးမှုတခုတာဖြစ်သည်
ဒါကတော့ အရှက်မရှိတဲ့ ဗမာတွေလေး သူတို့ဘယ်လောက် ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲးသလဲဆိုတာ သက်သေထူနေတာ…….
ပျုတွေက ဘယ်ကလာသလဲ ? ဆိုတာ( ၁) မောင်းဂွတ်လူမျိုး၊မှ တိဗတ်တိုတရုတ် and တိဗက်တိုဘာမင်း ကနေ(ကွဲ) ပျူ ၊ ချင်း ၊ ကချင် ၊ မြန်မာ ၊ကရင် (အဆုံး) နှင့်(တိဗက်တိုတရုတ်) ထိုင်းတရုတ်(ကွဲ) ရုမ်း ၊ ရုမ်းတရုတ် ၊ ရုမ်းမြန်မာ ပါ သက်သေတစ်ခုအနေနဲ့ ရှင်းပြချင်ပါတယ် ပျုက ဗမာ မှန်ရင် ဘာလို့ ဗမာတွေက ပျူစာကို မဖတ်တတ်တာလဲ ဘာလို့ မွန်တွေဆွကနေ စာပေ ယဉ်ကျေးမူ သာသနာ ကို တိုက်ခိုက်သိန်ပိုက်လုယူရတာလဲ ဘယ်ဘုရင်လက်ထက်မှလု ယူသလဲဆိုတော ဦအောင်းဇေယျ ပါ ရန်ကုန်သွေးန်နဲ့ သင်္ကန်ကျွန်းက သက်သေပါပဲ အခုသူတို့လုပ်တာလဲ မွန်တွေကို ယဉ်ကျေးမူကွယ်ပျောက် တသီန်တိန်ကောသ
ဒါက တဖက်သတ်ကျလွန်းအားကြီးတယ်။ သမိုင်းကို သူတို့လိုသလိုဆွဲယူဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ မဟာဗမာ လူမျိုးကြီးဝါဒကို ဆန့်ကျင်ကြပါ။
Min Ba Nyar Zwel Man Oo
Don’t Give Up,Mon!!!